Momba anay ao amin'ny Million Makers - Million Makers | Million Makers Llc, Million Makers LLC - Ao amin'ny toerana iray ihany no ilainao, Million Maker Llc, Million Maker LLC, MM Solutions INC, mm solutions, mm solution, mm solutions inc, mm solution, mm solution inc, mi
Momba anay ao amin'ny Million Makers
Ny tanjonay dia ny hanome vahaolana amin'ny zavatra rehetra mety ilainao amin'ny "Business International" na aiza na aiza ary hamaha ny fanamby ara-barotra henjana indrindra amin'ny mpanjifanay ary hanome traikefa tsara indrindra.
Vahaolana ara-barotra tsara indrindra
Fiaraha-miasa tsara indrindra eran-tany
Vahaolana ara-barotra mora vidy
Ny zavatra rehetra ilainao amin'ny toerana iray
Fifandraisana amin'ireo mpanome tolotra fandraharahana tsara indrindra sy Mpisolovava
Alefaso ireo fangatahana Mila mahafantatra
Serivisy sy vahaolana
Nandany traikefa an-taonany maro izahay tamin'ny fanatontosana ny fikambananay manokana sy iraisam-pirenena ary ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanolo-tsaina ara-barotra tsara indrindra, mpanome tolotra ary mpisolovava mba hanomezana tolotra tsara sy vahaolana ho an'ny mpanjifanay amin'ny vidiny Mifaninana indrindra.
Million Makers dia mpamatsy vahaolana tokana, manome vahaolana namboarina sy namboarina ho an'ny tsirairay, fianakaviana, orinasa ary orinasa izahay izay manampy anao tsy ao an-toerana ihany fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa amin'ny raharaha mifandraika amin'ny toro-hevitra momba ny fandraharahana, vahaolana momba ny fandraharahana, fametrahana iraisam-pirenena, fivarotana ary fividianana raharaham-barotra, fanokafana kaonty amin'ny banky, kaonty mpivarotra sy vavahadin'ny fandoavam-bola, fananganana orinasa any amin'ny faritany 109, fisoratana anarana marika any amin'ny firenena 119 miaraka amin'ny taratasy fangatahana tokana, fahazoan-dàlana amin'ny orinasa, birao virtoaly, isa virtoaly, fanitarana iraisam-pirenena, serivisy ara-dalàna, fanombanana ara-barotra, torohevitra ara-dalàna ao amin'ny ny dian-tongotrao nomen'ny mpiara-miombon'antoka aminay, mitodika amin'ny consultant, ny fahazotoana sy ny fanarahan-dalàna, izahay koa dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana vahaolana IT namboarina toy ny fampivoarana ny tranokala, ny vahaolana Ecommerce, ny fampivoarana Apps, ny varotra nomerika, ny vahaolana rindrambaiko ary ny fivoaran'ny teknolojia Blockchain mba hanonona anarana vitsivitsy amin'ny tena mifaninana. vidiny..
Vahaolana voarindra ihany no omenay izay mahomby indrindra ho anao, raha tsy efa fantatrao ny tanjonao sy ny fanendrena azy.
Amin'ny alàlan'ny traikefa midadasika sy ny serivisy isan-karazany nomen'ny orinasanay araka ny voalaza etsy ambony, dia manampy ny isam-batan'olona, ​​ny fianakaviana ary ny orinasa izahay amin'ny alàlan'ny fahaiza-manaonay manokana mba hanohanana, hanitarana ary hitombo, tsara toerana izahay hitarika anao amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana. Na liana amin'ny fahazoana, fampivondronana, famindran-toerana na fividianana ianao na mitady fampidinana ny fizotry ny birao any aoriana, mitady renivola na mpiara-miombon'antoka stratejika na mitady drafitry ny fifandimbiasana sy fanohanana na vahaolana IT azonao atao ny manampy anao amin'ny serivisy rehetra amin'ny vidiny tena mifaninana.
Tena mazava sy mangarahara momba ny fizotranay izahay ary manantena ny valiny avy eo dia mamaly ny fanontaniana lehibe misy anao
Fanoloran-tena isika ary ho antsika "ny etika manoloana ny mpanjifantsika dia voalohany"
Manaraka ny fomba fiasa tsy misy tomika ary mahomby ary ahitam-bokatra izay miasa mahasoa ho an'ny mpanjifantsika sy ny ankohonany ho vahaolana tsara indrindra.
Miorina ho antoka ho an'ny Kandida tsirairay avy, olon-drehetra, fianakaviana, orinasam-pifandraisana, mpiara-miasa ary mpiara-miasa izahay.
Serasera haingana sy mahitsy.
Tena ilaina ho anay ny tsiambaratelo angon-drakitra.
Nohavaozina momba ny lalàna iraisam-pirenena ankehitriny.
Isika dia Profesialy manana fahalalàna orinasa manokana.
Vahaolana natokana ho an'ny mpanjifantsika rehetra sy ny fianakaviany.
Ahoana no fomba fiasa
Azontsika tsara ny momba anao, ny orinasanao ary ny tanjonao alohan'ny handinihana ny safidy mety hiseho na ny mety hiseho.
Miara-miasa amin'ny taha ambony indrindra amin'ny famindram-po sy faharetana amin'ny mpanjifanay izahay, voavaly ny fanontanianao rehetra ao anatin'ny fotoana fohy indrindra indrindra miaraka amin'ny vahaolana tsara indrindra mifanaraka amin'ny zavatra takinao sy ny toe-javatra misy anao.
Tanjona feno sy tanteraka ary tanteraka isika.
Mifantoka fotsiny amin'ny vahaolana tsotra sy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika fotsiny izahay.
Miaraka amin'ny fifamatorana tokana sy mijoro ao anatin'ireo Indostria izay ankamantatra manokana dia omenay ny mpanjifanay hidirana tanteraka amin'ny fahatsinjovana rano.
Azafady vakio ny momba ny fomba fiasa ho an'ny mpanjifantsika sy ireo mpiara-miasa miasa .
Ny vahaolana ho an'ny tsirairay, fianakaviana, ary orinasa
Fananganana sy fanitarana iraisam-pirenena
Varotra ho an'ny varotra / fividianana
Ny serivisy rehetra sy ny vahaolana
Fananganana orinasa sy fanitarana
96 Firenena sy firenena 28 ao Etazonia
Kaonty banky any amin ny firenena 95 sy firenena 28 eto Etazonia
Manana orinasa ihazakazahana ianao, andao isika hiatrika zava-tsarotra momba ny dingana HR ho anao.
Ampiasao maimaim-poana ny vavahadin-tserasera asa azontsika raha hitady mpiasa any amin'ny toerana misy eran-tany.
Vondrom-paritra eropeana sy ivelany
Fisoratana anarana sy fanampiana iraisam-pirenena momba ny marika iraisam-pirenena any amin'ny firenena 119
Birao virtoaly amin'ny adiresy 64 manerantany
Famolavolana noforonin'ny Professional Designer amin'ny $ 200
Zavaboary miavaka sy miavaka manomboka amin'ny $ 200
Kaonty mpivarotra sy vavahady fandoavana
Fandraisana ekena tamin'ny firenena 190
Nomery virtoaly ho an'ny firenena 89 sy tanàna 290.
Mikaroha ny tenanao na ampiasao ny serivisy manokana.
Manome vahaolana CRM sy fampifangaroana izahay hanamafisana anao amin'ny fanaraha-maso tsara kokoa ny orinasanao.
Izahay ao amin'ny Million Makers aloha dia mifantoka amin'ny fahombiazan'ny orinasa.
Izahay dia manana tambajotra matanjaka sy mifandray amin'ny andrim-panjakana amin'ny filan-draharahan'ny vola ilaina.
Ny famatsiam-bola ny fitaovanao dia ahafahanao mitahiry ny volanao amin'ny zavatra ilaina amin'ny orinasam-barotra samihafa.
Ny matihanina manombatombana dia manana fahaiza-manao be dia be momba ny kaonty, hetra, ekonomika ary teatra.
Ireo tetik'asa 1000+ no vita
Mandamina serivisy ara-dalàna ho an'ny fianakaviana, olon-tsotra, mpianatra, orinasa ary orinasa izahay.
Noho ny fahazotoana sy ny fanarahana.
Mikaroka ny tenanao na ampiasao ny Serivisy manokana.
Manome anao saika karazana fanompoana ara-bola ara-bola mety izahay.
Ny ekipanay dia manolotra vahaolana feno eran-tany
Manohana ny tsirairay sy ny orinasa izahay amin'ny fitadiavana fotoana sy kandida.
Fifanarahana momba ny fanabeazana
Izahay dia tsy manefa ny mpianatra noho ny consultant.
Manana fahaiza-manao betsaka amin'ny fanaovana kaonty, hetra.
Manampy anao izahay hahita mpitarika ekena tsara izay manome fahaiza-manao ilaina noho ny fitomboan'ny orinasa.
Manome tolotra be dia be izahay hanampy ny orinasa manomboka amin'ny fifanarahana asa, fitantanana HR, karama ary hetra.
Araraoty ny tetikasan'ny indostria sy ny paikady fandraisana andraikitra voaporofo.
Famolavolana fiaraha-miasa sy famoronana, mamaly, fanamoriana ary SEO POTOHITRA
Mpanome vahaolana iray fijanonana ho an'ny fanomezana vahaolana ho an'ny orinasa
Ecommerce Solutions momba ny kalitao iraisam-pirenena.
Kaonty mpivarotra sy vavahady amin'ny fandoavam-bola ary vavahadin'ny fandoavana
Izahay dia manome vahaolana amin'ny famaranana ny vavahady fandoavana
Nivoatra fampiharana mihoatra ny 351+ ho an'ny mpanjifantsika iraisam-pirenena.
Ny fivoaran'ny marika sy ny vokatrao amin'ny Internet sy ny laoniny fitarika
Injeniera ny rindrambaiko avy amin'ny consulting amin'ny fampandrosoana, ny fitsapana ary ny devOps.
Vokatry ny vola sy vola miditra kokoa
Vahaolana Customchain namboarina, tsy ekena ny indostrianareo.
Tompon'ny orinasa mahaleo tena aho amin'ny fomba ahoana no ahafahanao manampy ahy?
Tamin'ny alalàn'ny traikefa be dia be, ny fahaizantsika sy ny serivisy maro nomen'ny fikambanana sy ny orinasantsika, dia nanampy sy nanamora ny tompona orinasa, orinasa sy freelance, niaraka tamin'ny fianakavian'izy ireo hanangana orinasa sy hanangana orinasa vaovao, hanitatra, hitombo ary hanohana ny orinasan'izy ireo na mitady asa dia tena misy toerana izahay no hitarika anao eo amin'ilay lalana mankany amin'ny fahombiazana. Na mahaliana anao ny Merger sy Acquisition, famindrana, te-hahemotra ny asa sy ny fizotran'ny birao, te-hahita karama na paikady stratejika na mitady ny fandaharam-piraisan'ny taranaka mandimby anao, na mitady toro-hevitra momba ny fananana na Serivisy momba ny fifindra-monina na fanabeazana any ivelany na IT Serivisy azonay manampy anao amin'ny serivisy rehetra araka ny voalaza.
Manolotra serivisy marobe ho an'ny mpanjifanay iraisantsika sy mpiara-miombon'antoka aminay izahay, izay misy ny tahiry manokana, Mpamatsy vola, vola mamatsy vola / VC Fund, Orinasa ary orinasa. Ny asan'ny tetikasa mahasoa sy azo antoka dia afaka manampy amin'ny fiaraha-miasa mahasoa sy ny famatsiam-bola koa isika, raha ilaina.